Nzira gumi dzeKuwedzera Peji rinotarisisa neYako Yemukati Sarudzo | Martech Zone
Zano rakanaka hariperi nguva sezvazvakaita neruzivo mune ino infographic. Diana Adams weBitRebels akaisa pamwechete runyorwa Nzira gumi dzekuwedzeredza iyo Pekutarisa paPosvo Dzako uye ZvinoSourcing yakashandura ikaita yakanaka infographic.
Zano iri rakananga:
Tumira zvakanaka zvemukati kazhinji (hongu, ndinoziva tanga tamboenda mukati mezororo)
Ita kuti zvawatumira zvigoverwa - tinoda Nyore Yemunharaunda Kugovana yeiyo WordPress!
Shandisa Zvishandiso Zvemukati Kugadzira - isu tine yambiro yekumisikidza yemimwe misoro kuburikidza Meltwater uye tinonyatsoda kudzika uye nguva yeruzivo yatinowana yekugovana.
Gamuchira Vanyori Vanyori - asi CHENJERA!
SEO - Tsvaga Injini Kugonesa ichiri kukosha asi usapfuure iyo. Heano nhanho dzatinotora kukwidziridza zvinyorwa zvedu.
Hora & Proofread Izwi rega rega Risati Ratsikiswa - Oops… tinokundikana pano. Ini ndaive nema doozies akati wandei pane yangu yekupedzisira positi yandakangogadzirisa. Takatamba nepfungwa yekuve nemupepeti, pamwe gore rino!
Batanidza Chivakwa (Asi Kwete Iyo Maitiro Aunofunga) - Ini ndinoda iro izwi batanidza kuwana kubva Saiti Maitiro. Ivo vanokurukura akakodzera zvemukati zvinongedzo kutyaira akawanda mapeji ekuona - isu tinoda Jetpack's zvine chekuita nembiru mashandiro eiyo!
Email Kushambadzira Nzira Yakarurama - ndosaka takavaka nekushandisa CircuPress!
Putsa Yakareba Post - Tinofanirwa kuita zvimwe zveavo asi ndichave akatendeseka, ndinovenga iyo 10+ tinya zvinyorwa izvo zviri kungotyaira kutarisa peji uye zvinoshatirisa vaverengi vako.
Shandisa Nhau Yemagariro zvakasikwa - Dai isu taive nenguva yakawanda, isu taizonyatsoshanda pane zvirinani mumiririri akaiswa mifananidzo yezvatinotumira uye nekushandisa yega yega nzvimbo yekutandarira zvinobudirira.
Tags: Kugadziridza blogBlog namagwatidzirocircupresscontent curationnyore magariro ekugovana mabhataniEmail Marketingvanyori vevaeniwedzera kuona pejichinobatanidza-kuvakambiru refupost frequencyzvakabatana zvinyorwaseokugoveranaevanhu vezvenhau
Ko Facebook Inofananidzwa neLinkedIn yeBhizinesi Networking?
Nei infographics iri Yechokwadi Yekushambadzira
Dec 1, 2015 pa 8: 06 AM
Iyi yakanaka chaizvo infographic. Kutenda nekugovana izvi Doug!
Sekuona kwangu kuona pane nzira mbiri dzekuwedzera kutarisisa peji pane webhusaiti:
Yakakura nzira (kuwana vashanyi vatsva).
Yakadzika nzira: nyengerera vaverengi varipo kuti vaverenge zvimwe (kuvandudza iwo maonero ekuona / chikamu
Isu munguva pfupi yapfuura rakaburitsa chinyorwa iyo iri kutarisa kune "nzira yakasimba", iine mamwe matipi anoshanda.
Ini ndinofunga ndinofanira kushandura ichi chinyorwa kuva infographic. 🙂
Dec 1, 2015 pa 8: 28 AM
Ini ndinofunga izvo zvirimo zvakakodzerwa neiyo infographic, Tamas!